Madaxweynaha Mareykanka oo waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha dalka Mareykanka, Barack Obama ayaa shalay warqadihii aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub ee dowladda Somalia ay u magacowday dalka Mareykanka, Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke, kaddib xaflad ka dhacday Aqalka Cad ee Mareykanka.
Danjiraha cusub ee ee madaxweynaha soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud u magacaabay inuu soomaaliya u fariisto Mareykanka oo ah R/wasaarihii hore Cumar C/rashiid Cali sharmarke ayaa noqonayaa danjirihii ugu horreeyay oo dowlad Soomaaliyeed ay u magacowdo Mareykanka in ka badan 23-sano.
Danjire Cumar C/rashiid oo la hadlay VOA ayaa arrin taariikhi ah ku tilmaamay in madaxweyne Oabam danjire Soomaaliyeed waraaqihiisa aqoonsiga ka gudoomo muddo dheer kadib.
“Arrintani waa mid taariikh u ah xilligan adkeynta xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Mareykanka,” ayuu yiri Cumar C/rashiid oo qaabilaaddiisa kaddib hadlayay.
Cumar C/rashiid xusay inuu si weyn ugu faraxsan yahay sida loo fududeeyay howsha magacaabiddiisa, ayna isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo bisha August ee soo socota booqan doona Mareykanka ay kala hadli doonaan Barack Obama waxyaabaha muhiimka ah ee dowladda Soomaaliya ay doonayso in xilligan laga caawiyo.
“Howsha ugu horreysa ee aan qaban doonno waa sidii aan xafiiskii aanu ku shaqeyn lahayn u furi lahayn, una qori lahayn shaqaalihii ka shaqeyn lahaa safaaradd, markaas kaddib ayaan ka hadli doonnaa sababihii keenay in la iibiyo dhismihii safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka aan ku lahayn,” ayuu ku daray hadalkiisa Sharrma’arke.
Danjire Cumar C/rashiid ayaa sidoo kale sheegay in isaga iyo afar waddan oo kale isku mar laga guddoomay warqadaha aqoonsiga danjirenimo, ayna tahay arrin uu aad ugu farxay in Soomaaliya ay danijre ku yeelato 23-sano kaddib dalka Mareykanka.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke u magacaabay danjiraha Somalia ee Mareyknaka, taasoo qayb ka ah xoojinta xiriirka labada dal, waxaana la filayaa sidoo kale in Mareyanka ay uu dhawaan safiir u soo magacaabo Soomaaliya.
Mareykanka ayaa la filayaa inuu dhawaan Soomaaliya si toos ah ugu soo dirsado safiir cusub, kaasoo ka howlgeli doona caasimadda dalka ee Muqdisho.